Indlela Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Indlela Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane EYurophu
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/11/2020)
Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane e-Europe ngeke nje kube mnandi, kodwa zemfundo futhi inothile, kakhulu. Umbuzo obaluleke nakakhulu ukuthi abafundi abaningi (nabazali) akuvamile cabanga yonke esisebenzayo, abafundi namakhono okuphatha ukuphila kudingeka ufunde ukuze umuntu azimele, self-aqondiswe, wemfanelo, grownups namasu! Solo Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane e-Europe ingakubonisa okungaphezu nje zokungcebeleka amahle.
Ukufunda ukuzulazula ukuphila kwakho siqu, ngenjwayelo, nje kubalulekile njengoba ukwazi ukuthi yini yakho lwezikhathi iwukuba University. Awukwazi ucabange yokuthola oA kuzo zonke izifundo uma ungazi kanjani ukubamba isitimela, phatha isabelomali, noma uhlanze izingubo zakho! Indlela enhle yokufunda ngawe ngenkathi unesikhathi esihle ukuhamba ngesitimela eYurophu. Kuyinto kude indlela elula kakhulu emhlabeni futhi uzoba nesikhathi ukuthola okwenzayo elilandelayo ngenkathi ujabulela umbono omuhle. Ngakho, ukuthatha uhambo futhi ufunde ukuthi kunjani laphaya emhlabeni wangempela. Sikunike imibono ukuze okuqalile.
Student Izikhangibavakashi sethu sokuqala nge zemininingwane kuyinto: Jabulela A Session By The Seine
I-Student Travel By Train eYurophu ayijabulisi ngokumangazayo kuphela kodwa uma uhlakaniphile futhi ingakhululeka! Into ngempela ezingavamile Paris! Bamba amabhodlela ambalwa ezishibhile iwayini ekhanda Seine ukujabulela ikhethelo isivuno phezu Paris Jazz yesehlakalo. Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane eParis kuyinto super lula, ngisho noma ungenawo ukukhuluma ulimi!
Vakashela Frederick Chopin, Jim Morrison, U-Edith Piaf, no-Oscar Wilde ku Pere Lachaise Amathuna Paris, France
Asazi ukusola uma ucabanga lena kancane ongaziwa, kodwa Pere Lachaise emathuneni empeleni enkulu ngempela! amathiphu: Ukungenela mahhala; download ibalazwe ungene ocingweni noma kuthebhulethi yakho ngaphambi kokuya ukuthola amathuna adumile.
Luxembourg eParis Izitimela
Frankfurt eParis Izitimela
Ukunakekela 4 Bears e Croatia
Student Izikhangibavakashi ngu zemininingwane e-Europe kungaba okungaphezu nje kumnandi. Njengoba umfundi, kubalulekile ukuzinika isikhathi ukuthola uthando lwakho noma nje ukunikeza emuva! Uma unesikhathi ngaphezulu kwe- amaholide, Kungani kungenjalo? Uma ufuna amanye zikhathi obumnandi, zinike isikhathi Kwekuheha ngu zemininingwane eCroatia futhi ukuvakashelwa Kuterevo. Ikamu lababaleki amabhere ansundu abadinga usizo ukuze kabusha wangena zasendle. Jabulela ukudlala, ukondla, noma ubuka nje lezi zilwane ezinhle.
Azungezwe Butterflies e-zoo Amsterdam sika, Holland
Nakuba esikuwo isihloko nemvelo, isitobhi esilandelayo yindawo yezilwane yase-Amsterdam. Akhiwe i-zoo yedolobha yigreenhouse enkulu egcwele izimvemvane ezinhle. A engavamile ngempela. I zoo has nezinye izilwane kakhulu, ezifana Kumabheja, kangaroo, futhi jaguar! Ithiphu: Ehlobo kuvulekile kuze kushone ilanga abasenakuphumula amakhonsathi 6-8 pm ngewayini.
Phuza i Igloo, cishe ukuthi, at The Absolut Ice Ibha e Stockholm, Sweden
Stockholm sika Ice Bar, labavulekela e 2002, yingenxa owayethandwa kakhulu Luhambo oludakayo eSweden. it wahosha 70,000 izivakashi elisonyakeni walo wokuqala, iye evezwe kwi-BBC CNN, futhi iye zazivame ukuhanjwa osaziwayo ezifana Pierce Brosnan futhi yaseSweden siqu Stellan Skarsgård. Le ndawo ingabe ngempela ukunikeza nencazelo entsha yegama ibinzana “elineqhwa” Ukuqedela isipiliyoni, iziphuzo ngisho ngakhonza eziyize ice cubes, ku bar eyenziwe ice amabhlogo ecacile! Kunganjani ukunweba Student Izikhangibavakashi yakho ngu zemininingwane eYurophu ngokusebenzisa umsebenzi iholide lapha. Uma ungumfundi, izwe ngempela oyster yakho.
Vakashela Bruges, Belgium like other Student Travel by Train
Qala off ukuhlala kwakho e-Belgium kanye uhambo Bruges. Bruges kuyinto edolobheni elincane elise empumalanga Belgium. Isithombe cobbled imizila nemisele Ungadliwa, futhi segcekeni lemakethe uphahlwe imibhoshongo ephakeme, emasontweni mlando, futhi almshouses ubudala acakiwe. Kukhona ekhethekile charm e entwasahlobo lapho daffodils ukhaphethi egcekeni ethulile we mlando begijnhof ukubaleka, noma ebusika (ngaphandle Christmas) lapho ungaba ezinhle uma ezineqhwa, idolobha cishe wena.
ukuvakasha delirium Cafe
Uma ungumuntu ngifuna ngaphezulu iphathi, ke gxuma esitimeleni Brussels njengawo omunye umfo Student Hamba nge- zemininingwane, and visit delirium Cafe lapho babe 2500 izinhlobo ubhiya kampompi! Kulula kakhulu ukuthola. Awukwazi ukuphuthelwa elidumile Delirium uphawu indlovu pink.
Iya ephathini in Ibiza, Spain
Ezinye izinto ungakwazi kuphela lisinde lapho usemusha, amaphathi ebusuku(s) kude in Ibiza ungomunye wabo! Jump esitimeleni Ibiza kuvulwa noma lokuvala ngesonto ukuze uthole isipiliyoni real! These two weeks, le ukuvulwa kwenzekani ngoMeyi kanye lokuvala ngeNgci / NgeNyoni, ukusingatha abaculi omkhulu waphesheya avela kubo bonke emhlabeni jikelele.
Iya ku isiqhingi, Europe Enkulu Kunazo Zonke Music Festival in Budapest, Hungary
Uma ungumuntu fan of big umculo imikhosi kufanele wenze sziget kube into eza kuqala. Minyaka yonke lolu komkhosi owathatha isonto lonke udlala inezinhlobo izenzo omkhulu wamazwe omhlaba Ibhayisikobho yezimanga ekamu ke, noma uhlale e Budapest okuyinto nje ungakwazi nokujikijela itshe lifike kude njengoba umkhosi lwenzeka isiqhingi enkabeni yedolobha! and many students like you Student Travel by Train there.
Hamba Ghost Ukuzingela Ngo Edinburgh, Scotland as a Student Travel by Train
Laphaya ngezansi ephithizelayo Edinburgh ezitaladini kunezwe emnyama, kuthule, indawo Esezalitshalwa. Maphakathi nawo-1980 iqoqo Underground Vaults Kwatholakala - bamakamelo zashiywa iminyaka ecishe ibe ngu ezingamakhulu amabili. Lezi amakamelo emangalisayo amnyama zakhelwe lasendulo itshe Edinburgh, nge Uphahla lwangaphakathi arched, izikhala zomlilo, futhi 18iwayini ekhulwini th- vaults. uma ningakholwa ukuthi kunezipoki lolu hambo kwenza umlando Edinburgh kumnandzi. Lokhu kusuke kuwufanele 13 quid (11 uma ungumuntu umfundi!).
Ngakho amaningi aseYurophu zemininingwane Tours ukuthatha, ngakho ezindaweni eziningi ukuthandana ne! Sanikeza nje amazwibela alokho ungase uvakashele Ngisafundela Hamba nge- zemininingwane. Vakashela iwebhusayithi ethi Gcina Isitimela and travel to any place your heart desires in Europe.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstudent-travel-by-train%2F- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / fr ukuba / ru noma / izilimi tr nokuningi.
#fun europeantravel umfundi abafundi TrainStation Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Izikhangibavakashi
Qedela Beginner Guide To Italy ngu zemininingwane